29 May 2022, Sunday |
स्वास्थ / शैली
एभरेष्टखबर June 4, 2020
ग्रास आइल्याण्ड हङकङको उत्तर–पूर्वी भागमा अवस्थित रहेको छ, जसलाई क्यान्टोनीमा ताप मुन भनिन्छ । ताइपो जिल्ला अन्तर्गत पर्ने यस टापुको क्षेत्रफल १.६९ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । ग्रास आइल्याण्ड क्याम्पिङको लागि उत्कृष्टमध्येको एक स्थल हो ।
सन् १५७३ भन्दा अघि ग्रास आइल्याण्ड डङ्गन काउण्टी अन्तर्गत सुई र यिप वंशको नाममा दर्ता रहेको पाइन्छ । सत्रौं शताब्दीदेखि यो भू–भाग माछा शिकारी तान्का जातिले डुङ्गा राख्न प्रयोग गर्न थालेको इतिहास छ । उनीहरुले त्यहाँ मन्दिरहरु निर्माण गरेका थिए ।
त्यस क्षेत्रका दुई भवनमा रहेका तीनमध्ये तिन हाउ मन्दिर दोस्रो दर्जाको र सुइ युत कुङ मन्दिर तेस्रो दर्जाको ऐतिहासिक भवनको रुपमा संरक्षण गरिएको छ । त्यहाँ तिन हाउ र कुन याम पर्वमा मेला लाग्ने गरेको छ ।
ग्रास आइल्याण्डका ताप पुन गुफा, पत्रे चट्टान, किङ लाम स्कूल, ङाउ सी डोङ समाधिस्थल पनि आकर्षणका केन्द्र रहेका छन् । सन् १९५७ मा निर्माण गरिएको तीन कोठे किङ लाम स्कूल विद्यार्थीको अभावमा सन् २००३ देखि बन्द रहेको छ ।
एक समय उक्त क्षेत्रमा २,००० जतिको बसोबास रहेको भए पनि अहिले अधिकांश शहरतिर बसाइँ सरिसकेका छन् । खेतिपाती र माछा मार्ने पेशामा रहेका केही मानिस अभैm पनि त्यहाँ रहेका छन् । केहीले भने आन्तरिक पर्यटकका लागि रेष्टुरेण्ट र पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यस टापुमा जानको लागि साइकुङदेखि प्रत्येक दुई घण्टामा एक फेरीको व्यवस्था रहेको छ । त्यसो त ताइपोस्थित चाइनिज युनिभर्सिटीको नजिकै मा लिउ सिउ पियरबाट पनि दैनिक दुई फेरी जाने–आउने गर्छन् ।
तापक्रम र हावाको स्थितिको आधारमा यो टापु क्याम्पिङको लागि उपयुक्त मानिन्छ । यसको वरिपरी रहेका खुला सामुद्रिक दृश्य मनोरम रहेका छन् । भौगोलिक रुपले सामान्य भिरालो र डाँडाको पाखामा क्याम्पका टेन्टहरु यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । शहरको कोलाहलबाट शान्त वातावरणमा रम्न चाहनेका लागि रोजाईको ठाउँ हो यो ।
पारिवारिक क्याम्पिङको लागि पनि यो ठाउँ उपयुक्त रहेको छ । यातायातको साधनबाट ओर्लिएपछि नजिकै रहेकोले धेरै हिंड्नु पर्ने छैन । क्याम्पिङको लागि आवश्यकीय सामान प्रायः साथैमा लगिने भए पनि खाद्य तथा पेय सामग्रीलगायत नजिकै रहेको पसलबाट किन्न सकिने सुविधा रहेको छ ।
हङकङका नेपालीमा पनि क्याम्पिङ जाने संस्कृतिको विकास भइरहेकोले दुई–तीन दिनको बिदाको समयमा कुनै न कुनै समूह त्यहाँ भेटिन सकिन्छ ।
तस्वीरः विक्रम गुरुङ/शब्दः बाहिङ
स्थापित बन्दै सेन्स अफ क्लिक
हङकङको सन्ध्याकालीन फोटोग्राफी (फोटो कथा)
त्यो अद्भूत क्याम्पिङ (फोटो स्टाेरी)
गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन
यी चिनियाँ : जो नेपाली बोल्छन्; गुन्द्रुक, किनिमा खान्छन्
पुरातात्त्विक स्मारक र परिसरका संरचना : हङकङमा गोरखा संग्रहालयका आधार रचना
नासिदैछ गोरखा इतिहास !
आफू र अरूलाई सहयोग गरौं
तीन दशकअघिको ‘नेपथ्य’
Everest Media Limited
Room 14A, 2/F, Wun Fat Building
8 Wang Fat Path, Yuen Long, NT
Tel: 852-3193 4474
Fax: 852-3193 4475
Like us on Facebook Follow us on Twitter Subcribe YouTube Channel Follow us on Instagram Like us on Google+
© everest media Ltd. -2018 All rights reserved.
Designed by: Thakuri Creation